Nepali Rajneeti | आखिर किन साधुहरू पहेँलो रंगको बस्त्र लगाउने गर्छन् ? यस्तो छ कारण
कार्तिक १४, २०७८ आइतबार ६० पटक हेरिएको
तपाइले साधु सन्त त पक्कै पनि देख्नु भएको होला? उनीहरुले लगाउने लुगा पनि पक्कै याद गर्नु भएको होला?
प्राय: सबै साधुहरुले पहेँलो बस्त्र लगाउने गर्दछन् तर तपाइलाइ थाहा नहुन सक्छ आखिर किन सबै साधु सन्तले पहेलो लुगा लगाँउछन पक्कै यो तपाइको मनमा प्रश्न आयो होला।
आखिर किन लगाँउछन त पहेलो लुगा ?
साधुहरुले पहेँलो लुगा लगाउनुमा धेरै आध्यात्मिक कारणहरु रहेका छन्। जस्तो कि हामि घाम अस्ताउने समयमा पनि घाम भनेको पहेँलो कलर हुने गर्दछ।
त्यस्तै हामि आगो पनि हेर्न सक्छौ। आगोको पनि कलर पहेँलो नै हुने गर्छ।
अनि हाम्रो शरीरमा ७ ओटा चक्र हुन्छ त्यसमा रहेको २ चक्र पनि यहि पहेँलो कलर नै रहेको हुन्छ। यी सबै कुराको आध्यात्मिक कुरामा एकदमै महत्व रहेको छ।
जसका कारण पनि यो पहेँलो लुगा पहिरिने गर्छन। सबै भन्दा महत्वपुर्ण कारण त यो कि पहेँलो रंगलाइ आनन्दको कलर भनेर चिनिन्छ। त्यस कारण पनि उनीहरुले अरु रंग हैन यही कलरको बस्त्र लगाउने गर्छन्। एजेन्सी यो पनि हेर्नुस यो भिडियो,
काठमाडौं। दुबईमा इमिरेट एयरलाइन्सको फइट ए ३८० विमान विमानस्थलमा रहस्यमय प्रवेशले सबैको ध्यान केन्द्रित गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय संचारमाध्यममा यो भिडियोको चर्चा निकै भइरहेको छ।
यो भिडियो भाइरल भएपछि इमिरेटको फ्लाइटलाई मानिसहरुले ‘आकाशकी रानी’ नामबाट बोलाउन थालेका छन्। ११ सेकेण्डको यो जादुमयी भिडियो वास्तवमै चकित पार्ने खालको छ।
इमिरेट एअरलाईन्सले आफ्नो ट्विटरमा यो भिडियो शेयर गरेको थियो, जुन हेर्दा हेर्दै भाइरल भएको थियो। ११ सेकेण्डको यो जादुमयी अद्भुत भिडियो यो समाचार तयार पर्दासम्म ६३ हजारले हेरिसकेका छन्।
विमानस्थलमाथि मडारिएको बादललाई स्ट्रयाटस बादल भनिन्छ। यो बादल ० देखि १२०० फिटको उचाइसम्म देख्न सकिन्छ। स्ट्रयाटस ल्याटिक शब्द हो जसको अर्थ फैलिएको भन्ने हुन्छ। यो खबर डिसी नेपालबाट साभार गरियको हो । भिडियो हेर्नुस,